Hataon-dry « Gendarme-Militaire » fianarana mitifitra ireo vahoaka any Atsimo – MyDago.com aime Madagascar
Hataon-dry « Gendarme-Militaire » fianarana mitifitra ireo vahoaka any Atsimo
Naharay vaovao mampalahelo avy amin’ny D’Gary izahay eto amin’ny MyDago.com, indro entinay aminao io vaovao nampitainy taminay io :
F’inona ihany ity HAGAIGENA ITY, tompoko ô ?!?
» Salama anao,
Dia misaotra nanoratra ary nanome hery koa, fa amin’ny alahelo lehibe zaho zao manoratra aminao zao .
F’efa tsy misy intsony ny fitadiavana an’i Remenabila raha ny any Betroka, fa dia tifitra-doro-trano- ary manombotra zay tandrify ny lalan’izy reo .
– F’efa Fokontany roa no may dia i Voromiantsa (65 olona), ary i Miary (95 olona), mba eritrereto ny tsy mana-kialofana !!!!!!
Tsy tenenina intsony ny olona samboritsamborina sy ny tifirina fotsina tsotr’izao , lasa ataon-dry Gendarme-Militaire fianarana mitifitra reo vahoaka zay amin’ny faritry antsimo-atsinanan’ny Betroka » Andriry » = Montagneux.
Io lay Andriry itarainako isan’andro ao amin’ny tononkirako isan’andro , « lava mangirifiry ».
– Nomaly nanao Havoria ny village iray « Ankoraky » dia mbola ao amin’iny faritry Andriry iny ihany io , tonga dia no-rafaler-ndry gendarme daholo ny vahoaka rehetra tao , nefa Havoria zany dia fomban’ny Bara faha-raza, amin’ny alahelo lehibe zaho amin’izao manoratra aminao zao.
Aleo hotohizana amin’ny manaraka
Misaotra anao ry namana Vahombey
Mahasolon-tena ny vahoaka 21 tapitsisa ve ireo mpizaika ireo?
Auteur Solo Razafy*Publié le 22 octobre 2012 22 octobre 2012 Catégories Politique
11 pensées sur “Hataon-dry « Gendarme-Militaire » fianarana mitifitra ireo vahoaka any Atsimo”
Mazava loatra fa tsy maintsy AMPANDOSIRINA hiala amin’ny taniny ny vahoaka, fa amidy amin’ny Karana sy Sinoa sy frantsay ny tany misy harena.
Mbola tsy mazava amin’ireo miaramila manohana an’i Dondrona ihany ve izao ???!
Risara Baomba – Ndrianarijaona André natao ho lehiben’ny Zandary no manome an’izao baiko izao .
Batrelaky dit :
Aiz’ary nareo zany? mbola tsy fantatrareo ihany ve atramin’izao fa isan’ny fomba fiadin’ny jiolahy ny manao fanamian’ny mpitandro filaminana? ra manakana eny andalana, nga izy misarontava intsony fa toy ireny gendarme reny no paoziny!! aza maika ny hanaratsy ny gendarme mikely aina lasa any atsimo any fotsiny fa mba diniho ihany aloha e!!
Ketadoza dit :
24 octobre 2012 à 8 h 55 min
Marina mitsy zany. Ny mpandroba amin’izao fotoana efa hary fitaovana mihintsy, tsy sabatra sy kibay intsony no entiny fa basy toy ny entin’ny miaramila.
Aiza moa ny porofo fa tena nisy io zavatra io? tsy hoe manao toetran ny tsy mino aho fa hoy ny fitenenan’ny ankizy tanora ankehitriny hoe « sary aloha raha tsy izany tsy nisy »
Misy olo-patatra avy any miary zao manko mitantara fa tsy tao anatiny hono izy ka tsy fantany izany.
Bakôjah dit :
ny fantatro fotsiny lo hoe misy malagasy tia tanindrazana lasa namita iraka any e! Mino za fa tsy ho vendrana velively izy reo na toy ny alika nomena baiko ka hitifitifitra tsy @ny antony ireo mpiray tanindrazana aminy!
Hararaotiko etoana ihany koa ny hanentana ny Malagasy mpiray tanindrazana hoe miankina @tsika ito Madagasikara ito! Ndao hiray hina, ndao handray ny andraikitra tandrify antsika tsirairay avy fa aza manaiky ataon’ny mpanao politika fitaovana fotsiny!
ANTSO LEHIBE HO AN'NY MPANDRAHARAHA dit :
24 octobre 2012 à 10 h 42 min
tanora rehetra manerana an’i Madagasikara ao anaty fikambanana lehibe iray mitady efa mafy fototra ary afaka manao Kongresy nasionaly avy hatrany mitady mpitarika:
-MBOLA TSY NALOTO TAMIN’NY RESAKA POLITIKA HATRAMIN’IZAY(1REPUBLIQUE,2EME,3EME)
-MATAHOTRA AN’ANDRIAMANITRA ARY MINO AN’I JESOSY KRISTY
-SAHY MIJORO AMIN’NY HEVINY
-TSY MBOLA MANANA ANTOKO POLITIKA ARY TSY MITAKOSONA AMIN’NY FITONDRANA ANKEHITRINY
-VONONA NY HIARA HIASA AMIN’NY TANORA
-VONONA HATOLOTRA HO KANDIDA HO FILOHAM-PIRENENA
-VONONA NY TENA HANASOA FIRENENA
-ARY MANAIKY ESORINA AMIN’NY TOERANY RAHA TSY MAHAVITA
-ARY VONONA NY HAMPIHAVANA NY ANTOKO POLITIKA SY NY VAHOAKA MALAGASY REHETRA
-TIA MIARA MIASA AMIN’NY FIANGONANA
-TSY MANOMPO VAHINY FA MANOMPO TANINDRAZANA
-MADIO EO ANIVON’NY FIARAHAMONINA
-MAHAY MANETRY TENA
-MANANA TRAIKEFA AMIN’NY RESAKA FITANTANANA
-SAHY MIADY HO AN’NY FAHAMARINANA
-TIA MANAMPY NY SAHIRANA
Mila anao ny Firenena,ianao ilay tadiavinay:
*MANANA PAIK’ADY MAHOMBY HAMPANDRESENA ANAO AMIN’NY FIFIDIANANA IZAHAY ARY AZO ANTOKA FA IANAO NO HO FILOHA AMIN’NY FIFIDIANANA FILOHAM-PIRENENA HO AVY
*RAHA SITRAKAO NY HIFANORATRA AMINAY NA HIRESAKA MIVANTANA MIHITSY AZA,DIA AZONAO ATAO NY MANDEFA SOSOKEVITRA NA MANDEFA NOMERAONAO AMIN’ITY ADIRESY MANARAKA ITY FA HIANTSO ANAO MIVANTANA IZAHAY.
N/B: tsy eto amin’ny site no amaliana ny antso fa amin’ny adiresy mail etsy ambony,Misaotra tompoko!
« Izaho mahalala ny hevitra Hieverako anareo hoy Jehovah,hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza »
Toka-po ohatra ny siny ny vahaoka ka tsy mahalala afa-tsy ny RANO tompoko o!
Sady efa tara!!efa potika sy rava ve avao hoe???fa taiza ianareo t@ ora nidona??
Izahay tsy mahalala afa-tsy DADA ary izy irery ihany no azo antoka hanarina izao fahavoazana lehibe izao.
Ny ankoatra izay dia bal!bla!!resaka tiana hatavy, raha tsy izany dia avy dia tairo dia ho hita eo ny vokany.
Ny mampalahelo dia :eo dia eo ilay vahaolana fa saingy matahotra ny hanome vahana @ fiverenan’i dada
daholo dia mamorona zavtra hafa , fa maninona raha miaky fa tsy misy ahasolo azy dia hatambatra ny HERY
dia vita io fa tsy mitsitokotoko etsy sy eroa??TSY MISY VAHAOLANA AFA TSY DADA EO fa aza manonofy
TOMPOKO o!!!ary aza izay mpitarika vilam-bava no jerena fa ilay tanindrazana miaraka @ »ilay olona TENA
TIA ary ireo efa voalazanareo ireo daholo izy dia i DADA 100% io TANISAINAREO EO IO ry MATITA.
Tena dakôro à 100% aminao ry bavy â !
Ny sasany toa mbola mitady olona tsy hary, kanefa ny firenena ity ao anaty lavaka !
Za mbô gaga anie e!!toa mila voatsiary ilay olona!!
« Varimbarian’ny lavitra koa tsy mahita ny ambany maso »
Tsy haiko aloha???izay tetika hafa no tsy haiko fa izay ny fanatro fa izy dia DADA!DADA!DADA ihany!
dada irery ihany??RAHA TĖ HO AVOTRA fa tsy misy afaka ny hisolo azy eo!!!MANONOFY angaha???
isambilo dit :
25 octobre 2012 à 14 h 17 min
tena minia mikimpy ve ny miaramila sa efa natao hilalao ny ain’ny mpiray tanindrazana aminy e!tsy vao izao io resaka hitako eto io no reko,ireo mponina rhefa milefa de samborin-drizalahy sy tifirina fa hoe dahalo hono,mba mipetraha amin’ny toerany fa raha ianao no ravàna tanàna tsy hilefa ve ianao?basy sy afo no handravana anao???nisy pire noho ireo aza reko fa violer-ndry zalahy hono ny vehivavy,enga anie mba ho diso izany fa raha marina izany de hoy aho hoe mba matahora an’Andriamanitra ihany zalahy fa ny ataonao anio anie ka hivaly amaray e,tsy antso tody izany fa mananjina ny tanintsika ka sarotra hanaovan-dratsy.
Tsy mandao ny tanàna tofirina, mandositra tofirina atao vono-moka !!
Iza no mba hiaro an’ireo vahoaka tsy manan-tsiny ireo ? Ilay « matahotra masoandro » ve, sa ireo be kibo tsy afaka miazakazaka akory ?
Loza amin’atambo ho an’izay rehetra nipoiran’izao fahoriana goavana izao !
Précédent Article précédent : ABATTRE L’UNILATERALISME PARLEMENTAIRE : UN AUTRE COMBAT A MENER
Suivant Article suivant : RALAISEHENO GUY MAXIME : TSY MIERITRERITRA AM-PIALA MORAMORA AN-DRAJOELINA ISIKA